परिकारः स्वादिलो चिकेन विङ्स
२० औं शताब्दीको उत्तरार्धपछि मात्रै चिकेन डाइटका रूपमा खान थालिएको पाइन्छ । नेपालमा भने केही पछि मात्रै यसलाई डाइटका रूपमा खान थालिएको हो । यो मासुका अन्य आइटमभन्दा सर्वसुलभ हुनुका साथै सर्वप्रिय पनि छ । यस्तै, यो रातो मासुभन्दा तुलनात्मक...
गर्मीमा चुस्त-दुरुस्त रहन दैनिक पिउनुस् एक गिलास लस्सी
स्मार्टफोनलाई छिटो चार्ज गर्न अपनाउनुस् यी उपाय
कामना त्याग्नुस्, आनन्दमा रमाउनुस्
बाबुहरि ज्ञवाली, जेठ २८, २०७६
मानिसको स्वरूप शाश्वत् अस्तित्व हो, मृत्यु होइन । उपनिषेदमा भनिएको छ यदा सर्वे प्रमुच्युते काम ये स्य हृदि श्रीता । अथ मत्र्योमृतो भवत्यत्रा ब्रहा समश्रुते ।। अर्थात्, जुन बेला मनुष्यका हृदयमा रहेका सम्पूर्ण कामनाको नाश हुन्छ, त्यसबेला यो मरणशील मनुष्य...
दैनिक हिँड्दा सुध्रन सक्छ वृद्ध महिलाको स्वास्थ्य
लोकसंवाद संवाददाता, जेठ २७, २०७६
वासिंटन । स्वस्थ अथवा निरोगी रहनका लागि व्यायाम जरुरी हुन्छ । शारीरिक रूपमा सक्रिय मानिसलाई अन्यको तुलनामा हृदय रोग, मोटोपन, सुगरलगायत रोगको खतरा कम हुन्छ । यस्तोमा प्रश्न उठ्न सक्छ- कति समय व्यायाम गर्दा यी रोगबाट बचेर लामो जीवन जिउन...
सात छोरीपछिको छोराे बचाउनै धौ धौ
जुम्ला । जुम्ला जिल्लाको तिला गुफा नगरपालिकाका ६२ वर्षीय भक्तबहादुर बोगटी जुम्लास्थित कर्णाली प्रतिष्ठान अस्पतालमा पाँच वर्षीय छोरा विशाल बोगटीको उपचारमा हुनुहुन्छ । घरनजिकको स्कुल जाँदै गर्दा बाटोमा जङ्गली फल मचैनो खाँदा बिरामी भएका छोराको स्वास्थ्य अवस्था निकै चिन्ताजनक भएपछि...
'बिना दर्ताका पसल र दर्ता नगरिएका औषधी बेच्ने विक्रेतालाई हदैसम्मकाे कार्यवाही गर्नुपर्छ'
लोकसंवाद संवाददाता, जेठ ८, २०७६
लोकसंवाद डट कमले जनसरोकार र राष्ट्रिय सरोकारका विषयमा लोकसंवाद गर्ने गर्छ । हामी प्रश्नको उत्तर होइन, यसको समाधानका लागि लोकसंवाद सञ्चालन गर्छौं । लोकसंवादमार्फत् हामी कुनै पनि विषयवस्तुलाई मसिनो गरी पर्गेल्ने जमर्को गर्छौं । आजको लोकसंवादको विषय छ औषधिको गुणस्तर,...
लोकसंवाद संवाददाता, जेठ ७, २०७६
मुगु । जिल्लामा पछिल्लो समय धेरै मानिसको स्वास्थ्यमा विभिन्न समस्या देखिएपछि छायानाथ रारा नगरपालिकाले योगाभ्यास सञ्चालनमा ल्याएको छ। अशिक्षा, गरीबी, बेरोजगारी र पछिल्लो समयमा अखाद्य वस्तु खानपिन निकै प्रयोग हुनाले मानिसको जीवनस्तर दिनप्रतिदिन खस्कँदै गएपछि नगारपालिकाभित्र योग सञ्चालन गरिएको हो।...
मोटोपनबाट हैरान हुनुहुन्छ ? यी काम गर्नुस्
लोकसंवाद संवाददाता, जेठ ६, २०७६
काठमाडौं । व्यस्त जीवनशैलीका कारण अधिकांश मानिस शारीरिक अभ्यास गर्न पाउँदैनन् । जसका कारण मोटोपन तथा तौल बढ्ने समस्या देखिन्छ । यसको सम्बन्ध खानपान तथा दिनचर्यामा निर्भर हुन्छ । फेइङसुईका अनुसार यी उपाय गरे केही हदसम्म मोटोपन तथा तौल बढ्ने...
कसैलाई नभन्नुस् यी पाँच कुरा
लोकसंवाद संवाददाता, जेठ २, २०७६
काठमाडौं । मानिसको जीवनमा सुख र दुःख आइरहन्छ । यो जीवनको हिस्सा पनि हो । त्यसकारण प्रतिकूल परिस्थितिमा पनि कहिल्यै पनि आत्तिनु हुँदैन । बरु यसको मुकाबिला गर्नुपर्छ । तर, जीवनमा केही कुरा यस्ता हुन्छन्, जो अरुलाई भन्नुहुँदैन । गुरु...
समृद्धि चाहानुहुन्छ ? भगवान विष्णुलाई यी वस्तु चढाउनुस्
काठमाडौं । सृष्टिका पालनकर्ता मानिने भगवान विष्णुको पूजाअर्चना बिहीबार गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता छ । यस दिन भगवान विष्णुको पूजाअर्चना गर्नेहरूले पहेलो रङका वस्तुको अत्यधिक उपयोग गर्छन् । गुड तथा चना भगवान विष्णुलाई अर्पित गर्छन् । तर, के भगवान विष्णुलाई गुड...
घरमा सुख-समृद्धिका लागि गर्नुस् यी पाँच काम
काठमाडौं । वास्तु शास्त्रमा घरमा सुख-समृद्धि ल्याउन विभिन्न प्रकारका उपाय उल्लेख गरिएको छ । घरमा केही वस्तु राखेर परिवारमा खुसीयाली ल्याउन सकिने वास्तुशास्त्रमा उल्लेख छ । यस्तै, केही वस्तु हटाएर पनि घरमा सुख-समृद्धि ल्याउन सकिन्छ, जुन यसप्रकार छन् । चर्किएको...
डिप्रेशन रोगः नकारात्मक सोचले निम्त्याउँछ
प्रा.डा.सुदर्शन नरसिंह प्रधान, बैशाख २३, २०७६
महाभारतको प्रसंगबाट कुरा सुरु गरौं । पाण्डवहरू वनबास भएका बेला तलाउको पानी खान खोज्दा युधिष्ठिरलाई यक्षले प्रश्न गरेका थिए संसारमा सबैभन्दा छिटो के चल्छ ? युधिष्ठिरले जवाफ दिए मन । युधिष्ठिरले भनेजस्तै यथार्थमा मन नै सबैभन्दा छिटो चल्छ । यो...
प्याज खाउँ ! स्वस्थ्य रहुँ
शिरिष अर्ज्याल, बैशाख २२, २०७६
प्याज हाम्रो भान्साको एक लोकप्रिय बहुप्रचलित खाद्य वा भनौंतरकारी हो । प्याज खानेकुराका बिभिन्न उपयोगमा ल्याईन्छ । यो एक अत्यन्तै गुणकारी तरकारी भएकोले आयुर्वेदमा यसलाई तरकारीको राजा भनेर भनिएको हो । प्याजमा अनेकौं औषधीय गुणहरु रहनुका साथै विभिन्न भिटामिन तथा...
ह्याकरकहाँ तपाईंको निजी जानकारी नपुगोस् भन्ने चाहानुहुन्छ ? अपनाउनुस् यी तरिका
नयाँ दिल्ली । आजको डिजिटल दुनियामा पासवर्ड धेरै महत्वपूर्ण छ । इमेलदेखि सोसल मिडिया मञ्चसम्म मानिसको अकाउन्ट पासवर्डले सुरक्षित राख्छ ।सम्बन्धित व्यक्तिको अनुमतिबिना उसको अकाउन्ट कसैले पनि खोल्न सक्दैन । तर, ह्याकरले कसैको पनि अकाउन्टमा सजिलै प्रवेश गर्न सक्छन् ।...
यी हुन् गर्मीमा छाला स्वस्थ बनाउने खानेकुरा
लोकसंवाद संवाददाता, बैशाख ६, २०७६
काठमाडौं । चिसो मौसममा मात्र होइन, गर्मीमा पनि छालाको हेरचाह गर्नु आवश्यक हुन्छ । छालाको हेरचाह गर्न विभिन्न उपाय अपनाउन सकिन्छ । यसमध्ये एक हो, खानपान । छाला स्वस्थ राख्न फलफूल र हरियो सागपात खानुपर्ने चिकित्सक बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार...
मानिसमा आत्महत्याको विचार किन आउँछ ?
प्रा.डा.सुदर्शन नरसिंह प्रधान, बैशाख २, २०७६
मानिसको मन सधैंभरी एकैनासको हुँदैन । बाहिरी वातावरणले मनलाई प्रभावित पारिरहेको हुन्छ । राम्रो कुरा सुन्दा खुसी महसुस हुनु र नराम्रो कुरा सुन्दा दुःखी महसुस हुनु स्वभाविक हो । खासगरी परिवारको सदस्य तथा आफन्तको मृत्यु हुँदा, परीक्षामा असफल हुँदा, धनजनको...